I-Beijing Duomilai isazimasa umboniso we-HRC eMonti, e-UK
UKUHLAZIYA kwathatha inxaxheba kwi-2020 HRC London, e-UK ukuqala nge-3 ukuya kwi-5 kaMatshi.
Izitayile zodidi kunye nefashoni zitsala abathengi abaninzi beze kusityelela kwaye bathethe malunga nentsebenziswano. Phantse zonke iindwendwe zivela eYurophu kwaye zonke iindwendwe zinomdla kwiimveliso zethu. Abanye abathengi base-UK bafuna ukuba ngumhambisi njengoko babecinga ukuba iimveliso zineemarike ezilungele eYurophu.
Ngomdlalo, sidibene nabathengi abohlukeneyo abavela kumazwe angama-25 kwaye bafumana izimvo zabo ngohlobo lwengubo yechephe kunye neeapile abafuna ukuyenzela abasebenzi babo abapheki.
Ixesha lokuposa: ngoMeyi-11-2020